Sida loo adeegsado akoonno badan oo WhatsApp ah iOS-ka oo aan lahayn Jailbreak | Wararka IPhone
Imisa jeer ayaad ka fikirtay sida xiisaha leh ee ay noqon laheyd in dhowr akoon oo WhatsApp ah isla iPhone-ka ku yeeshaan Qaar badan, waan ognahay. Si kastaba ha noqotee, waqtigii ayaa yimid, casharkaan yar waxaan ku bari doonaa sida loo isticmaalo dhowr akoonno WhatsApp ah (labadaba tiro kala duwan leh) isla qalab iOS ah. Waxaad noo sheegi doontaa inaysan jirin wax cusub, maadaama tan marwalba ay suurta gal ka ahayd JAILBREAK, laakiin taasi waa si ugub ah, inayna u baahnayn Jailbreak haddii aad isticmaasho habkan cusub ee xiisaha leh. Waxaad ku sameyn kartaa hab deg deg ah oo fudud, oo laga heli karo iOS 9.0 ilaa iOS 9.2 si qof walba uu uga faa'iideysto fursada.
Waa muhiim in la ogeysiiyo taas awgeed waxaan u isticmaali doonnaa muuqaal cusub oo dhinac saddexaad ah oo ay tahay inaan ku rakibno iPhone, taas oo muujinaysa khatarta amniga ee suurtogalka ah ee ay tahay inaad hubiso inaad rabto inaad ordo ka hor intaadan bilaabin hawsha, sidaas darteed, waa lagama maarmaan inaad ogtahay inaad habkan u isticmaaleyso qatar. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo hadda maya ma jirto wax muujinaya in astaanta astaanta u tahay nabadgelyada qalabkeena aag kasta.
Soo dejiso oo rakib waxa noqon doona koontadaada caadiga ah ee WhatsApp, oo ku xiran lambarkaaga caadiga ah.
Markaad rakibto, fur Safari qalabkaaga
Xullo "WhatsApp -ka 2«
Haddii aad raacday tillaabooyinka sawirka waxaad arki doontaa in WhatsApp oranji uu bilaabmayo soo dejinta barnaamijkaaga 'SpringBoard'.
Waxay na weydiin doontaa inaan ku dhejino shahaado xarfaha carabiga ah, waxaan bixinaa «rakibi«.
Marka la rakibo waa inaan tagno «Dejinta> Guud> Macluumaadka»Si loo xaqiijiyo astaanta cusub ee aad rabto inaad rakibto, si aan ugu siino rukhsad amni oo ku filan WhatsApp-kan cusub.
Waxaan horey u helnay WhatsApp si buuxda u firfircoon oo la heli karo oo leh lambar kale, taasi waa, waxaan haynaa laba akoon oo WhatsApp ah oo laga heli karo isla qalab. In kastoo, ay run tahay in soo dejinta macmiilka labaad ee WhatsApp (midka leh astaamaha liinta) uu yara yaraan doono, ee dulqaad diyaarso. Si kastaba ha noqotee, nidaamku waa mid aad u fudud.
Marka lagu daro WhatsApp, waxay na siineysaa suurtagalnimada inaan sidoo kale ku xirno koonto labaad ee codsiyada sida Facebook, Vine iyo Instagram. Marka waxtarka habkani waa mid aad u sareeya. Maskaxda ku hay inaanan ogeyn inta ay Apple ku qaadanayso inay weeraraan qaabkan anshaxa suuban ee lagu rakibo dhowr xisaabood, markaa haddii aad maskaxda ku hayso, ha ka waaban oo horay u sii soco. Xor ayaad u tahay inaad noogu sheegto faallooyinka sida beddelaaddan cusub ay adiga kuugu shaqeyso. Waxaan horeyba ugu isticmaalay barta 'Instagram' waxayna u socotaa si qumman!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo isticmaalo akoonno badan oo WhatsApp ah oo ku saabsan iOS-ka oo aan lahayn Jailbreak
Mawduuca aniga ayaa xiiso ii leh, dadka raba inay helaan WhatsApp shaqeeya iyo shaqaale kale waxaan u arkaa «xiiso, laakiin mudnaan, maxaan u doonayaa 2 koontooyinka WhatsApp? Anigu waxaan leeyahay tayda shaqsi ahaaneed shaqana uma isticmaali doono whatsapp….
Wanaagsan, shaqadayda waxay i siinayaan taleefan shirkadeed oo aan caqli lahayn sidaa darteed waxay noqon doontaa ikhtiyaarka ugu fiican ee aan ku maareeyo WhatsApp taleefankayga shaqsiga ah aniga oo aan siinin lambarka gaarka ah ee xiriirka shaqada !!
Sidee lagu kalsoonaan karaa qaabkan ???? Uma hanjabo aq macluumaad la xaday ama waxyaabo la mid ah qaabka?
soo dejiso barnaamijka 'whats app' oo qumman ... waxaan ka heystaa barnaamijka whats laba dal oo kala duwan ... hadda ma awoodin inaan furo instagram
Jawaab ku sii aiacobellis
Waad salaaman tahay, waxaan kala soo degay dhibaato la'aan laakiin markii aan furo waxaan helaa calaamad muujinaysa in Apple uusan wax oggoleyn wax kalena aanan sameyn karin. Iphone 6 IOS9.2
Daanyeel waa inaad gashaa goobaha / guud / maaraynta qalabka ... oo aad u oggolaataa VNE Software iyo Technology
La xaliyay Waxay u shaqeysaa si qumman. Mahadsanid.
LIONEL DIAZ dijo
Sideen u hawl geliyaa, ma inaan si isku mid ah u siiyaa qolkayga mise waa inuu mid kale yeesho ???
Jawaab LEONEL DIAZ
Waxay ii sheegtaa waqtiga oo dhan inaysan macquul aheyn in la rakibo arjiga waqtigaas ... Maxaan sameeyaa? Waxaan horey u bilaabay iPhone-ka mana istaagi doono.
Dhibaatada ogeysiisyada ma imaaneyso haddii barnaamijka uusan furmin miyaa la xaliyay?
Aniga iima shaqeyso aniga, mar kasta oo aan isku dayo qalad ayaa igu dhaca, "Ma soo dejisan karo barnaamijkan." Ma jiraa qof horeyba nasiib u yeeshay?
Ku jawaab gabopump
Waxaan sidoo kale helayaa inaysan macquul ahayn inaan kala soo baxo barnaamijkan
Xiiso Leh ... Laakiin koontada 'WhatsApp' ayaa laygu afuufayaa ... yaanan ku dhahin labo ... waa isdili doontaa .. hahaha
laakiin, sikastoo aan rabo, waa inaan haystaa lambarka kale ee u dhow si aan ugu haysto hal aalad; maaddaama WhatsApp ay ku weydiineyso inay kuu soo dirto lambar xaqiijin ah ... ama maya?
Ku jawaab olivo42
"Profiles" Meeshaas kama heli karo?
Jawaab Cesar Blancarte
Anigu sidoo kale ma helayo wax "profiles" ah.
dejimaha / guud / maaraynta qalabka… oo u oggolaada VNE Software iyo Teknolojiyada
Maareynta aaladda ??? .. Taasi ma ahan aniga
waxay iigu muuqataa aniga hoosta VPN
Ma rakibi karo, waxaan helayaa "wax aan macquul aheyn inaan kala soo baxo barnaamijka" ... Waqtigaan la joogo, "whatsapp 2" lama rakibi karo. Sideen ku xaliyaa? Waa la soo dejiyey, laakiin lama rakibin. Mahadsanid.
Ku jawaab Sai Maldonado
Markaad rakibineyso waxaan helayaa qalad, xal kasta? Mahadsanid
Waxay bixinaysaa qalad mana ogolaanayo soo degsashada, anigana sidoo kale
Shuruudaha ayaa soo baxa
Waxay umuuqataa in tufaaxdu marhore xalisay, maxaa yeelay iima ogola in aan rakibo sidoo kale, fariin "aan macquul aheyn in la soo degsado barnaamijka" "ok" ama "isku day" sidaas oo kale
Waxaan u arkaa dhamaan rakibayaashan shaki, waxaan rajeynayaa in amniga iphone uusan wax u dhimin laakiin waxaan ogaan doonaa markay goori goor tahay
Jawaab Chuck Norris
Miyaan ku isticmaali karaa isku cod 2 qalab oo kala duwan ????
Amniga ayaa iga qaaday ...
Lama rakibi karo…. Ma ogtahay sababta ??? Waxay iga dhigeysaa inaan si joogto ah isugu dayo ...
Hagaag, ma helayo qoraallo ama maareynta aaladda.
Xaqiiqdu waxay tahay inaan ku qoro raadinta kore dejimaha oo ay soo baxdo
Laakiin waan ku dhajiyaa waxayna ii direysaa guud ahaan halkaasna waxba kama arko maareynta aaladda
Qof kale ayaa dhacaya?
Dhibaato isku mid ah ayaan qabay ... Ma xallin kartaa?
Waan soo dejiyey shalay oo waa hagaagsanaa. Maanta whatsappku ma shaqeyn sidaa darteed waxaan isku dayay inaan markale soo dejiyo laakin marwalba qalad ayaa ku dhaca. tani ur xun….
Waa la xiray ... qalad ayaa ku boodaya markii la rakibayo shahaadadana laguma soo dejinin astaamaha iPhone
Ku jawaab mfmf
Ma shaqeyneyso, ilaa shalay galab ma dajiso.
App-ka whats ayaa ii shaqeynaya aniga oo aan wax dhibaato ah qabin .. instagram-ka ayaa hoos ii dhigaya laakiin qalad ayuu i siiyaa ..
Waxaan hayaa iphone 6s oo lagu daray ios 9.2 waana ii ogolaaneysaa inaan soo dejiyo laakiin waqtiga la rakibayo waxay ii sheegeysaa inaan dib loo celin karin waxaan raadinayay fagaarayaal kale qaarna waxay dhahaan wuxuu ka shaqeeyaa ios 9.2 iyo kuwa kale inuu yahay kaliya 7 iyo 8 ma aqaano sida loo hagaajiyo, wax muuqaal ah ma muuqdaan ama wax la mid ah
Jawaab Francisco Javier Ariza Molina
Waxaan helayaa isla soo dejinta laakiin markay dhamaysato rakibisteeda waxay i siisaa qalad macquul ma ahan inaan la soo degsado barnaamijkan waqtigan. i caawiya..
Ilaa shalay dalabku sifiican ayuu u shaqeeyay, isla waxbaa igu dhacaya aniga dibna uma soo celin karo. Waxaan helay qalad.
Waxay horay u joojisay inay shaqeyso
Ku jawaab Alberto Iacobellis
qofna ma garanayaa bedel?
Waxaan ku tijaabiyay IOS 8.4 iyo 9.1 kale waxayna ku shaqeysay dhibaato la'aan, xitaa uma baahnin inaan sameeyo astaanta oggolaanshaha maadaama aysan waligeed muuqan, salaan iyo mahadnaq macluumaadka, waxaan ku daalay raadinta ikhtiyaar ikhtiyaariga ah nuqul bulsheed.
Ku jawaab katire7
Ha ku rakibin, dhaladaasi waxay ii keentay khasaaro ku dhow 500 oo sawir oo ka yimid abka asalka ah Sawirrada iphone-kayga 4. Iima oggolaan doono inaan galo barnaamijka sawirada mana beddeli karo sawirkeyga 'whatssap profile'. hadda waa inaan dib u soo ceshano oo aan soo dejiyo kaabta iCloud ee aaladdayda. HA DARSADO waxaan kuu sheegayaa saldhig.
Jawaab ku sii Donell Méndez
Khalad soo degso, wax la qaban karo
Ku jawaab Rranki
Waxay i siisaa qalad mana rakibi karo. Waxaan haystaa iphone 6 oo leh iOS 9.2. Sidoo kale ma aqaano sida loo galo boggaga Dejinta - guud - qaab-dhismeedka, ma lihi qaabab, ugu yaraan raacitaanka waddadan.
Waan ku guuleystey inaan rakibo, ka dib markii aan soo dejiyey waxaan oggolaaday astaanta goobaha ka dibna si caadi ah ayaan u qaabeeyey! Waxaan ku tijaabiyey farriimaha taleefankayga labada koontadoodba wayna shaqaysaa, laakiin sida saaxiibkay madasha ku leeyahay, haddii aad ku daasho hal xisaab, ku fikir 2. Waxaan doorbiday in aan tirtiro oo aan rakibo Telegram si aan ugu diro feylasha ilaa 2 g iyo g. Waa waxtar badan
Waad salaaman tahay Alfredo, intee in le'eg oo isku day ah ayaad rakibi kartaa? Faallooyin kasta oo lagu rakibo? wuxuu u shaqeeyaa iphone 9.2?. Waad ku mahadsantahay kaalmadaada
Jawaab Sandra Tobon
Had iyo jeer waxay soo saartaa qalad ah inaan la soo dejin karin, waxaan isticmaalaa macruufka 9.2 iyada oo aan lahayn JAILBREAK mana shaqeeyaan. Waxaan iskudayey inaan rakibo 3 saacadood
Jawaab Jairo Celis
My iPhone 6S ma muuqdo »astaamaha» qofna ma garanayaa inuu wado kale ku socdo mise waxbaa la qabtaa si ay u muuqato? Haddii aanan oggolaanin arjiga lama rakibi karo. Mahadsanid.
Qofbaa durba helay xal, waxay ku qaadatay 2 maalmood inuu dib isugu dayo, laakiin qalad bay gashay markay soo degsaneysay sida badankood, salaan ...
Ma rakibi karo, horeyna waan u haystaa arjiga, waxaan galay Safari mana heli karo “ios.othman.tv, ma i caawin kartaa?
Ku jawaab Diegollll
Ma rakibi karo. astaanta ayaa ka muuqata desktop-ka laakiin wey iska baaba'aysaa iyada oo aan waxba la rakibin
nasiib daro sida muuqata ma shaqeyso, waxay umuuqatay mid xiiso leh
Jawaab Miguel Angel Arredondo Salvatierra
Nachete 69 dijo
Pg "ios.othman.tv" aniga sidoo kale kuma haboona, wuxuu u boodaa "vips.othman.tv" astaantuna ma muuqato.
lama rakibin, wax xal ah?
Bogga whatsapp-ka lagala soo baxo ikhtiyaar iima siinayo. Ma jiraa qof wax ka og arintaas? Ma riixi karo whatsapp 2.
Wareegyada Swing 2 oo ka socda Abuuraha Flappy Shimbira oo imanaya toddobaadkan